Maxay tahay cabsida Koofur Galbeed ka haysta Doorashada shanta Diseembar? – Kalfadhi
Maxay tahay cabsida Koofur Galbeed ka haysta Doorashada shanta Diseembar?
Arrinta Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed darteed, Baydhabo waxay wajaheysaa culeysyo siyaasadeed iyo kuwa ammaan. Bishan 5-teeda, oo ku beegan Arbacada soo socota, ayey doorashadu ka dhici doontaa halkaas. Waxaa ka harsan 4 maalin oo kaliya. Hal musharax uun baa ka haysta Guddiga Doorashooyinka shahaadada uu ku gali karo tarkanka Madaxweynaha Koofur Galbeed; waa Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ma ogola inuu musharraxaas u tartamo xilkaas, waana sababta ay dad badan ugu qaateen in loogu dan lahaa isaga shuruudo ay DFS ku xirtay cidda geleysa doorashadaas. Shuruudahaas waxaa ka mid ahaa inuu Musharaxa Madaxweynaha Koofur Galbeed ka haysto Xarunta Dambi Baarista (CID) Soomaaliya warqad caddeeneysa inuusan dambi qaran gelin.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, ayaa hadda difaacaya Roobow. Isagoo la hadlayey VOA-da ayuu yiri “in xilligaan kadib ay suuragal tahay in la hor istaago musharrax (Mukhtaar Roobow) shahaado haysta ma ahan mid munaasib ah”. Mursal waxa uu sheegay inuu Roobow yahay muwaadin, dowladdana ay la gashay hishiis, oo isagoo xor ah uu waqti badan kula qaatay Muqdisho.
Maamulka Koofur Galbeed wuxuu horay ugu eedeeyey DFS iney Baydhabo ka dejisay lacag fara badan, hub, ciidaan iyo gaadiidka iska celiya rasaasta oo la sheegay in diyaarado lagu geeyey halkaas, wax yar ka hor inta uusan gaarin Baydhaba Wasiirkii Biyaha Soomaaliya, Cabdicasiis Xassn Maxamed (Lafta Gareen), oo la rumeysan yahay inuu yahay musharrax ay dowladdu taageereyso. Dowladdu eeddaas waxba kama soo qaadin, laakiin shalay ayey markale ciidan diyaarado ku geysay Baydhaba, waxaana si weyn uga carooday Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (BFS) ee Koofur Galbeed.
“Koofur Galbeed, Dowladda kuma faragashato Ciidanka, Lacagta, Arrimaha Dibadda iyo shaqada Federaalka oo dhanba, marka iyaduna waa in ay faraha ka qaadaa Arrimaha Gudaha Koofur Galbeed” ayey Xaniifa Xaabsade ku tiri shalay shirjiraa’id. Xildhibaan Aadan Madoobe ayaa isaguna muujiyey inuu cabsi ka qabo in AMISOM, oo joogta Baydhaba, ay garab siiso DFS. Waxa uu yiri “maanta dhibaatada dib u billaabatay waa tii aad darteed u timaadeen, hadii wax dhacaan adinkoo joogana waxa ay tirtireysaa howshii aad soo qabateen iyo dadaalkiinnii, eeddaasna wax-baad ku yeelan doontaan, marka walaalayaal arrintaas wax ka qabta”.
Wasiirka Amniga Koofur Galbeed, Xasan Xuseen, ayaa u sheegay SONNA iney ciidanka dowladdu geysay Baydhaba xoojinayaan Ammaanka, waqtiga doorashada oo foodda ku soo haysa Koofur Galbeed darteed, ayna taasi tahay kaalmo ay u baahan yihiin. “Ciidanka la keenay waxa ay u yimaadeen sugidda amniga” ayuu yiri Xasan Xuseen. Wasiirku waxa uu ku dooday in ay Al-shabaab qatar ku yihiin iney doorashadaas u dhacdo si nabad-gelyo leh, ayna tahay taas mid ay ka hortagiddeeda masuuliyadi ka saaran tahay DFS iney ku caawiso Koofur Galbeed.
Laakiin, waxaa sidaas uga aragti duwan Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, oo laga soo doortay Baydhaba. “Baydhabo uma baahneyn ciidan hor leh oo la geeyo” ayuu yiri Guddoomiye Mursal. Dadka qaar ayaa aaminsan in ciidanka ay DFS geeneyso Baydhaba lagu difaacayo musharraxiin ay dowladdu la dooneyso Xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, hase ahaatee arrintaas waxa uu Guddoomiye Mursal ka yiri “waxaba kalama socdo arrintaas, laakiin marnaba ma taageerayo in dalka fawdo la geliyo, ciddii qalad ku kordhisana iyadaa lagula xisaabtamaa”.
Dowladda Farmaajo ayaa ka aamusan wali cabsida ay qabaan Reer Koofur Galbeed. Waxaa, iyaga oo DFS ku eedeynayaa fara-gelin, horay isu casilay Guddigii Doorashada Koofur Galbeed, waxaa xigay Madaxweynahii Koofur Galbeed, iyadoo xili sii horeysay iyo haddaba ay taagan tahay baahida loo qabo iney dowladdu u fasirto shacabka Koofur Galbeed tilaabooyinkeeda ku wajahan iyaga. Xildhibaan Aadan Madoobe ayaa yiri “arrintani (ciidanka la geeyey Baydhaba) waxay ka hor imaanneysaa shuruucda dalka, heshiishkii iyo kalsoonidii Ummadda Soomaaliyeed, wanaagii socday oo billowdayne waa ay burburineysaa”.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta Muqdisho kusoo wajahan
Golaha Aqalka Sare oo maanta ka doodaya Hindisaha Xeerka Guddiga La-dagaalanka Musuqa